Tobago: Fanavaozana ny fizahan-tany COVID-19 ofisialy
Home » Toerana fitsangatsanganana » Tobago: Fanavaozana ny fizahan-tany COVID-19 ofisialy
Rehefa mitolona hatrany amin'ny indostrian'ny areti-mandringana COVID-19 ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany, ny Tobago Tourism Agency Limited (TTAL) dia nanao fanentanana niomerika mba hitondra lafy tsara sy fanantenana amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manerantany ary mamporisika ny lasa ary ireo mpitsidika amin'ny ho avy mitazona ny "Manonofy an'i Tobago".
Ity fampielezan-kevitra amin'ny varotra ataon'ny TTAL ity dia tsy mikasa ny hitazona hatrany ny sain'ny Tobago ho an'ny mpandeha mandra-pisokafan'ny nosy soa aman-tsara ny asa aman-draharahany, fa koa hafatra ho firaisankina amin'ny vondron'olona manao dia lavitra. Miaraka amin'ny toerana itodiana sy fikambanana mpiara-miombon'antoka eran'izao tontolo izao i Tobago - ao anatin'izany ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba, ny World Council and Travel Council sy ny World Tourism Organisation - amin'ny fampielezana hafatra iraisana momba ny faharetana, ny fahatsaram-panahy ary ny fanoloran-tena hanao ny làlana mankany amin'ny indostria rahampitso mamiratra.
#DreamingOfTobago dia fampielezan-kevitra novokarin'ny mpampiasa 100% izay mitady hitantara ny tantaran'i Tobago tamin'ny mason'ireo mpitsidika taloha sy mponina ankehitriny. Amin'ny alalàn'ity fampielezan-kevitra ity dia haneho ny nosy amin'ny alàlan'ny sary mahavariana ny TTAL, horonantsary mahasarika ary fijoroana vavolombelona nostalgic, mba hitoeran'ny mpitsidika isam-paritra sy iraisam-pirenena ny tanjona eo afovoan'ny Covid-19 krizy sy ny sisa.
Taorian'ny "fandefasana malemy" tamin'ny fiandohan'ny volana aprily, tamin'ny Mey 2020, ny Tobago Tourism Agency Limited dia nanangana tamim-pomba ofisialy ny hetsika #DreamingOfTobago miaraka amina horonantsary fohy fanaovana teaser fampahafantarana ny fampielezan-kevitra amin'ny sehatra an-tserasera. Manasongadina rakitsary mahatalanjona any anaty rano sy anaty rano an'i Tobago, izay tsy voadio, ilay video manasa ny vondron'olona mpivahiny an-tserasera mba hanatevin-daharana ilay resaka ary hizara ny fahatsiarovan-dry zareo amin'ny alàlan'ny tenifototra ofisialy #DreamingOfTobago, sady manaparitaka hafatra fanantenana ary mitazona ny filan'ny fivezivezena velona hatrany.
Louis Lewis, tale jeneralin'ny TTAL dia nanambara: “Ny tanjonay amin'ity fampielezan-kevitra ity dia ny hitazomana ny vondrom-piarahamonin'ireo mpandehandeha eran'izao tontolo izao hifanentana sy hanome aingam-panahy fahatsiarovana ny zavatra niainana tany Tobago. "Dreaming of Tobago" dia manome sehatra ifampizarana, hampifandraisana ary hiandrasana miaraka ny ho avy rehefa afaka mivezivezy any Tobago tsy misy fika sy tsy voakitika ary tsy hita intsony ireo mpitsidika. "
Abu Dhabi fizahan-tany dia mikarakara fivoriana virtoaly momba ny valinteny aretin'ny COVID-19
Nevis: Fanavaozana ny fizahan-tany COVID-19 ofisialy